सभ्य, शिष्ट, समृद्ध र सुन्दर साँफेबगरका स्वप्नदर्शी « Anumodan National Daily
सभ्य, शिष्ट, समृद्ध र सुन्दर साँफेबगरका स्वप्नदर्शी
प्रकाशित मिति : १० असार २०७४, शनिबार १५:३६
‘चुनावी प्रचारप्रसारमा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, आममतदाताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ’ लामो समयसम्म राजनीति, शिक्षा तथा समाजसेवामा इमान्दार छवी बनाउन सफल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार ध्वजबहादुर कुँवरले शालिनतापूर्वक जवाफ दिए– आम साँफेबगरबासीबाट हामीले अपेक्षा गरेकोभन्दा उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । व्यक्तिगत रूपमा मैले शिक्षक हुँदा अथवा राजनीतिमा रहँदा अथवा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई जनताले राम्रैसंग मूल्यांकन गर्नु भएको रहेछ । त्रिपुरासुन्दरी क्याम्पस स्थापना, जनालीकोटको जिर्णोद्वार, वैद्यनाथ धामको विकासका लागि गरेको कामको उच्च मूल्यांकन गर्नुभएको रहेछ । हेर्नोस् जनतामाझ चर्चा छ– यसले (ध्वजबहादुर) राम्रो काम गर्न सक्छ । अर्कोकुरा, अबका स्थानीय तह पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितका सरकार हुन् । हामीले संविधानको व्यवस्थाअनुसार धेरै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पढेलेखेका जनप्रतिनिधि हुनु आवश्यक हुन्छ भन्ने पनि जनताको भावना रहेको पाएका छौं ।
अछामको सिद्धेश्वरमा २०१० सालमा जन्मिएका ध्वजबहादुर युवाकालदेखि नै नेपाली का“ग्रेसप्रति आकर्षित भएका थिए । उनकै शब्दमा– म २०३२ सालतिर बनारसमा पढ्थे । नेपाली कांग्रेस प्रतिबन्धित अवस्थामा थियो । नेपालमा कठोर पञ्चायती व्यवस्था थियो । सशस्त्र संघर्ष चलिरहेको थियो । त्यतिवेला युवा तथा प्रभावशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का, प्रदीप गिरी लगायतसंग चिनापर्ची भयो, कांग्रेस, प्रजातन्त्र, राजनीतिक आन्दोलनप्रति रुचि बढ्न थाल्यो ।
कुँवर बनारसबाट म्याट्रिक पास गरेर पढ्नका लागि राजधानीतिर लागे । ‘मेरो २२ वर्षको उमेर थियो, उनले भने, म सोच्थे– किन विपि कोइराला, गशेणमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरूले दुःख खेपिराख्नु भएको छ । किन भारत निर्वासनमा बस्नु भएको छ । प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेर कुँवर २०३३ सालमा अछाम फर्किए र प्रभाधमकोट मिडिल स्कूलमा पढाउन थाले । त्यति नै बेला पुसमा विपि कोइराला मेलमिलापको नारासहित स्वदेश फर्किनु भयो उनले भने मलाई कौतुहल भइरहेको थियो ।
देशभित्र उथुलपुथलको अवस्था थियो’ कुँवरले विगत स्मरण गरे– यता अछाममा वयलपाटामा सदरमुकाम सार्ने विषयमा आन्दोलन भइरहेको थियो । जिल्ला अस्पताल बयालपाटामा राख्ने भन्ने कुराको विवाद थियो । साँफेबगरमा ठूलो आन्दोलनमा भयो । प्रशासनले गोली चलायो । चार जना शहीद भए । डम्बरबहादुर स्वाँर, तप्तबहादुर स्वाँर, हस्तबहादुर शाह, डबलबहादुर कुँवर, कालुसिंह कुँवर, नैनसिंह कडायत लगायतका आन्दोलनका नेताहरू जेल पर्नुभयो । १८ जना घाइते भए । यी सबै घटनाले मलाई क्रान्ति, संघर्षमा लाग्न प्रेरित गरिरह्यो ।’
यी सबै घटनाले उनमा पञ्चायती व्यवस्थाकाप्रति घोर घृणा जाग्दै गयो । ‘म कास्कीको पोखरामा विएड पढ्दै थिए, २०३५ सालको अन्त्यतिर विद्यार्थी आन्दोलनको शुरु हुँदै थियो’ उनले त्यो कालखण्ड सम्झिए– ‘आन्दोलन बढ्दै गएपछि म पनि सहभागी भए । जनमत संग्रहको घोषणा भयो । मै बहुदलको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न लमजुङ, पाल्पा, स्याङ्जा खटिए । त्यस क्रममा मैले काँग्रेस, प्रजातन्त्रका बारेमा धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाए ।’
उनी २०४० सालमा अछाम फर्किए र त्रिपुरासुन्दरी हाइस्कूलमा हेडमास्टरका रूपमा काम गरे । उनले अध्यापनका साथै राजनीतिक गतिविधि बढाउ“दै गए । अछाममा शिक्षक संघको स्थापना गरे र संघको संस्थापक अध्यक्ष बने । ‘२०४६ सालको आन्दोलनमा म लागेकोमा स्थानीय प्रशासन र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले धम्की सहितको चेतावनी दियो, तर मैले मानिन’ उनले भने– जिल्लामा मण्डलेहरूको जगजगि थियो । प्रशासनले धरपकड शुरु ग¥यो । धेरै नेता पक्राउ परे । आन्दोलन सफल भयो । त्यसपछिका दिनमा कांग्रेसको हरेक गतिविधिमा सहभागी बने । ०४८ सालको आम निर्वाचनमा जिल्लाका तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रिय भए । तीन वटै क्षेत्रमा कांग्रेस जित्यो । देशभरी कांग्रेसको बहुमत आयो र सरकार गठन भयो । २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा का“ग्रेसको सरकार बन्यो ।
त्यतिन्जेलसम्म उनको राजनीतिमा राम्रै छवी बनिसकेको थियो । २०५० सालमा उनी बर्दिया जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भए । ‘मैले त्यहा काम गर्दा सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर आठ हजार परिवारलाई पाँचपाँच कठ्ठाको दरले जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था गरे’ उनले भने– तर, दुर्भाग्य २०५१ सालमा कांग्रेसको सरकार बिघटन भयो । मैले पदबाट राजिनामा दिए । सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि विथोलियो ।
त्यसपछिका धेरै समयसम्म पार्टीमा खासै भूमिका नपाएका वौद्धिक व्यक्तित्वका कु“वर अहिले साँफेबगर नगरपालिकामा काँग्रेसका तर्फबाट प्रमुख (मेयर) को उम्मेदवार छन् ।
‘तपाईंको जित्ने आधार के हो’ उनले सहजतापूर्वक जवाफ दिए– पहिलो आधार भनेको पार्टीभित्रको अभूतपूर्व एकता नै हो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा अछाममा देखिएको एकता अहिले फेरि महसुस गरेको छु । पार्टीका सबै नेताकार्यकर्ता एकजुट हुनुभएको छ । ‘साँफेबगर नगरपालिकाका समस्या, चुनौति सम्भावनाको चाहीँ कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ’ नगरपालिकाको विकासका लागि थुप्रै कल्पना बुन्नुभएका उनले भने– बुढिगंगाको किनारालाई हराभरा बनाउनु छ । बगरैबगर रहेको छिपेखोलाको तटबन्ध र हराभरा बनाउनु । बुढिगंगा तथा छिपेखोलामा पाइने ढुंगा, बालुवा, गिट्टीबाट ती नदीखोलाको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा उपयोग गर्नुपर्दछ ।
साफेबगर भएरै मध्यपश्चिम लोकमार्ग र सेती लोकमार्ग निर्माण भइरहेका छन् । यी नगरपालिकाको द्रुत आर्थिक विकासका लागि ठूला अवसर हुन । यी सडकको निर्माणपछि यो नगरपालिका ठूलो व्यापारिक केन्द्र बन्दैछ । त्यस्तै, मरेतुल्य भएको विमानस्थललाई जिउदो बनाएर हवाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु छ । यो नगरपालिकाका उत्तरपश्चिमतिरका साविकका छ गाविस भौतिक विकासका दृष्टिले कमजोर छन् । त्यहाँ सडक, विद्युत, खानेपानीको समस्या छ । त्यसैले यी गाविसलाई विकासको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नस पर्दछ ।
त्यस्तै, बयलपाटामा रहेको क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । श्रीकोटमा रहेको क्याम्पस बल्लतल्ल धानिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू समस्याग्रस्त छन् । यिनको सुधारका लागि ठोस योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ ।
पहिले सुविधा अनिमात्र कर
ट्यांकरमै बोकेर पनि घरदैलामो खानेपानी
जलविद्युत तथा सिंचाईको समुचित विकास
युवाहरूका लागि पर्याप्त रोजगारी
धार्मिक स्थलहरूको दीर्घकालीन संरक्षण र सम्वद्र्धन
‘नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगातको विकासमा तपाईका कल्पना र योजना ? उनले शान्तपूर्वक उत्तर दिए– हाम्रा युवाहरू रनभुल्लमा छन्, यिनीहरूका लागि बाटो दिनुप¥यो । मेरो अुभव छ– सन्तमहन्तहरू सहभागी हुने धार्मिक कार्यक्रममा आउने युवाहरू धेरैजसो कुलतबाट मुक्त हुने गरेका छन् । त्यसैे म सोच्दै छु– विद्यालयमा नैतिक शिक्षाका लागि व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यस्तै, युवाहरूका लागि रोजगारीको सिर्जना गरिनु पर्दछ । जस्तो खप्तड, बाब्लामा प्रचुर मात्रामा जडिबुटी छन्, यी जडिबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरेर पनि धेरै युवालाई रोजगारी दिनु सकिन्छ । ‘नगरबासी तथा युवालाई हाम्रो विकास हुन थाल्यो’ भन्ने महसुस गराउनु पर्दछ ।
यो नगरपालिका जलस्रोतका दृष्टिले निकै धनी छ । बुढिगंगा, छिपेखोलाका साथै पर्वाली, इकडी, अदिली, इकाडी गाड छन् । यी सबैबाट जलविद्युत उत्पादन तथा सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, खानेपानी व्यवस्थित हुनसकेको छैन । मुल (मुहान) हरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । बयालपाटा, रिडिकोट, चण्डिका लगायतका गाउ“मा खानेपानीको अभाव छ । मेरो कल्पना छ– खानेपानी आयोजनाहरू पुरा नहुन्जेल ट्यांकरमा पानी बोकेर पनि जनताको घरघरमा पु¥याउनु पर्दछ । अछाम पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला हो, तर यसलाई दीगो राख्न पानीको पर्याप्त व्यवस्था त गर्नु प¥यो नि । त्यसैले पानीको स्रोत व्यवस्थापनका लागि जागरण अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
त्यसैले मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ– पहिले सुविधा अनिमात्र कर ।
अहिले साँफेबगर मेघा सिटीका रूपमा विकास भइरहेको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले भूमि व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विमानस्थल वरपरको अव्यवस्थित जमिन व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । कालभैरवथान र साँफेबगर जोड्ने पक्कीपुल निर्माण गरिनु पर्दछ ।
यो नगरपालिकामा प्रशिद्ध वैद्यनाथ धाम छ । म आफैं पनि यसको संरक्षण, सम्वद्र्धनमा बीसौं वर्षदेखि लागेको छु । त्यस्तै, जिम्डारी क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धनकोे आयोजनालाई अझ व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । यसका साथै संगै जोडिएको बान्नीगढी जस्तो अर्को प्रशिद्ध धार्मिक र प्राकृतिक रूपमा सुन्दर स्थल छ । यी सबैको एकीकृत विकासका लागि नगरपालिकामा छुट्टै विभाग नै खोल्ने सोचमा छु ।
सा“फेबगरमा प्राविधिक शिक्षालयको निकै खाँचो देखिएको छ । त्यसैले जनकल्याण माविलाई प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा स्तरोन्नती गर्ने योजना छ । लामो समयदेखि बन्द रहेको साँफेबगर विमानस्थल कालोपत्रे हुँदैछ । कम्तिमा पनि साताको एक दिन हवाई उडान गरिने छ । ‘साँफे सुतेको छ, अब जगाउनु पर्दछ’ उनको सपना छ ।
हामी कुराकानीको अन्त्यतिर आइपुग्यौं । उनलाई सोध्यौ– साँफेबगर नगरबासीलाई तपाईंको अपिल ? मेयरका उम्मेदवार कुँवरले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरे– साँफेबगर नगरबासी दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू ∕ तपाईंहरू सभ्य, शिष्ट, समृद्ध र सुन्दर साँफेबगरको सपनालाई पुरा गर्न नेपाली कांग्रेससंग होस्टेमा हैसै गर्नुहोस् । कांग्रेसको इतिहास, राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताको हकहित, लोकतन्त्रका लागि निर्वाह गरेको भूमिका स्मरण गरिदिनुहोस् । साँफेबगर नगरपालिकामा हामीलाई अवसर दिनुहोस्, हामी तपाईंको मतको सम्मान गर्दै तपाईंको कल्पनाअनुसारको नमुनाको साँफेबगर नगरपालिका निर्माण गर्नेछौं ।